စက်မှုအလင်းရောင်ကျွမ်းကျင်သူ LED Fireflier Lighting Limited
အမြင့် output ကိုမီးသီး
LED ကို 101
လီယိုနှင့်စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာအတွက်အကောင်းဆုံးအလင်းကိုရွေးချယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဝယ်ယူခဲ့သောဤမီးလုံး၏ဒုတိယအစုဖြစ်သည်။ မကြာခင်သူတို့နဲ့အတူအရောင်းပြခန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။
James C - စီအီးအို & တည်ထောင်သူပါတနာ
ဖောက်သည်သည် Highbay မီးလ်တာနှင့်အားရပျော်ရွှင်သည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ နောက်လာမည့်ပရောဂျက်ကိုသင်၏ fixture ဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲပါမည်။ HBL-200W.Best Regards အသစ်ကိုကျွန်ုပ်မြင်ချင်ပါသည်
ဂလော်ဒီယာ - အရောင်း Manager ကို
အလွန်ကောင်းတဲ့မီးသီး - အလင်းသည်တောက်ပသည်။ ငါကကြိုက်တယ်, ဒီဇိုင်းကိုကြောက်မက်ဘွယ်ပါ! အလွန်သဘောကျ! ငါလျင်မြန်စွာပေးပို့ခြင်းနှင့်ကောင်းသောစျေးနှုန်း, ငါမျှော်လင့်ထားအတိအကျ။
စတီဖာ - စီအီးအို
Fireflier Lighting သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး LED Industrial Lighting ထုတ်ကုန်များကိုကျွမ်းကျင်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။
LED High Bay Light အကြောင်းအားလုံး LED High Bay Light ဆိုတာ ဘာလဲ။ ကြီးမားသော အတွင်းခန်းကို အလင်းပေးလိုသောအခါတွင် LED High Bay Light သည် ပြီးပြည့်စုံသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီလိုအလင်းရောင်မျိုးဟာ indoor s တော်တော်များများအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။
Outdoor Parking Lot Lights အကြောင်း သိလိုသမျှ မိတ်ဆက် LED မီးလုံးများသည် စွမ်းအင်မည်မျှသက်သာသည်ကို သင်သိပါသလား။ အမေရိကန်စွမ်းအင်ဌာနက ၎င်းတို့သည် ၂၅ ဆ ပိုမိုကြာရှည်ခံနိုင်ပြီး စွမ်းအင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်း အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။bမှာနေရင်..
150W LED High Bay Light သည်စျေးကွက်တွင်အဘယ်ကြောင့်လူကြိုက်များသနည်း။ LED မီးများရှိနေသည်မှာကြာပြီ။ ၎င်းတို့အား ၁၉၆၁ တွင်ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးယခုအခါ၎င်းတို့သည်ယခင်ကထက် ပို၍ လူကြိုက်များလာသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် LED မီးလုံးအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ အဘို့ ..
480v LED High Bay မီးများရှာဖွေနေပါသလား။ ဒီမှာပါ! 480v LED High Bay မီးများကိုဂိုဒေါင်များနှင့်စက်ရုံများကဲ့သို့ကြီးမားသောနေရာများတွင်အလင်းရောင်ပေးနိုင်ရန်သုံးနိုင်သည်။ ဤမီးလုံးများသည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုနည်းစေပြီး o ထက်အလင်းပိုထုတ်သည်။
မင်းရဲ့သတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။ ဒါကြောင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ ၁၂ နာရီအတွင်းသင့်ကိုအကြောင်းပြန်ပါမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Catalog အသစ်ကိုရယူပါ။
မူပိုင်ခွင့်© 2010-2021 Fireflier Lighting Limited ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
မူပိုင်ခွင့်© 2010-2021 Fireflier Lighting Limited ။
cookie Settings များလက်ခံ